On mar 19, 2018 1 454
Ho tanterahina rahampitso, eny amin’ny lapan’ny Antenimieram- pirenena, ao Tsimbazaza ny fifidiana ny lalana vaovao hifehy ny fifidianana, eto Madagasikara. Taorian’ny fandinihana izany, izay nataon’ny asam-baomiera dia fantatra fa nisy ny fanovana maro izay nataon’ireo solombavambahoaka, indrindra fa ireo tsy miara- dalana amin’ny fitondrana tahaka ny Mapar, ny Tim, etc… Ireto farany izay hitafa amin’ny mpanao gazety etsy amin’ny lapa, ao Tsimbazaza, anio maraina, hitondra fanazavana misimisy kokoa mikasika ity lalana vaovao ity.
Araka ny fandinihana manokana ireo andalana vitsivitsy mikasika ity lalana ity dia betsaka ny lesoka hilana fanamboarana sy mitaky ny fandinihana azy misimisy kokoa fa tsy hiazakazahana amin’ny fifidianana. Hatreto, manome vahana ny kandidam- panjakana izy ity, ary karazany hahamora ny fanodinkodinana ny safidim-bahoaka sy vokam-pifidianana.
Ny tena zava-doza, ary ilana ny fahamailoan’ny rehetra, indrindra fa ireo depiote, hampandany izany, taratry ny fiverenan-dalana ity lalàna ity, ary ho loza mitatao ho an’ny tena demokrasia izay katsahin’ny firenena fatratra ankehitriny. Mba tsy aha-tompontrano mihono antsika, indro andininy vitsivitsy, hitondrana famakafakana avy amin’ny fanoratana sy ny mpahay lalàna.
1- Ny fotoana nosafidian’ny Governemanta handefasana ny volavolan-dalana rehetra momba ny fifidianana eny anivon’ny parlemanta dia hita fa feno kajikajy miendrika finiavana hametraka lalam-pifidianana hanome vahana ny olona tohanan’ny Fanjakana. Raha araka ny tetiandro nifanarahana tamin’ny mpiara-miombon’antoka iraisam-pirenena, ny fiaraha-monim-pirenena ary ny CENI dia tamin’ny volana may 2017 no tokony efa nalefa nodinihina teny amin’ny Antenimiera roa tonta ireo volavolan-dalàna ireo.
2- Andininy faha- 6: Tsy voasoratra ho anisan’ireo manam-pahefana tsy maintsy mametra-pialana raha mirotsaka hofidiana ny mpikambana ao amin’ny Governemanta. Mifanohitra amin’ny andininy faha-64 amin’ny Lalam-panorenana anefa izany. Ahiana noho izany ny tsy mampitovy lenta ny kandida rehetra satria misy izany ny kandidam-panjakana.
3- Andininy faha-12: Mitsabaka amin’ny andraikitry ny CENI izay mahaleo tena araka ny andininy faha-5 amin’ny Lalam-panorenana ny Governemanta. Miverin-dalana ny fandrafetana ny lisi-pifidianana satria ny Governemanta no manam-pahefana hanapa-kevitra momba ny fanokafana sy fanitsiana ny lisi-pifidianana. Voatohintohina ny zon’ny olom-pirenena hifidy satria nohasarotina ny fanoratana anarana ao amin’ny lisi-pifidianana noho ny fanerena ny olom-pirenena hanaporofo ny antony tsy mahatafiditra azy ao amin’ny lisitra.
4- Andininy faha 60 sy 62: Tamin’ny lalam-pifidianana teo aloha dia voarara tsy hanao fampialezan-kevitra ny mpiasam-panjakàna ambony sy ireo lehiben’ny sampan-draharaham-panjakàna rehetra eny ifotony. Amin’ity volavolan-dalàna ity kosa dia avela hanao fampielezan-kevitra izy ireo ivelan’ny fotoam-piasany. Sarotra anefa ny manavaka ny maha-manam-pahefana olona iray sy ny maha-olom-pirenena tsotra azy any ambanivohitra. Atahorana noho izany ny hisian’ny fanerena ireo olom-panjakàna hanao fampielezan-kevitra ka hanohitohina ny safidim-bahoaka.
5- Andininy faha-120: Milaza ilay volavolan-dalàna fa bileta mitokana isaky ny kandida no ampiasaina raha misy ny fihodinana faharoa. Izany dia endrika fiverenan-dalana mankany amin’ny fangalaram-bato ary ny ezaka rehetra natao ho fampitovian-jo ny kandida dia very avokoa. Ny fampiasana bileta samihafa dia manamora ny fangalaram-bato ary manamora ny fividianan-tsafidy (corruption électorale).
6- Andininy faha-189: Namoraina ny fanafoanana ny voka-pifidianana satria raha tsy tonga eny amin’ny SRMV ao anatin’ny dimy andro aorian’ny fifidianana ny fitanana an-tsoratra (PV) dia azo heverina ho toy ny tsy misy (Procès verbal de carence). Ankilany anefa (article 180), dia nofoanana ny voalazan’ny lalam-pifidianana ankehitriny fa manan-kery mitovy amin’ny tena izy ny fitanana an-tsoratra eny an-tanan’ny kandida (suppression de la valeur original du PV auto-copiant).
(article 66 présidentielle, article 50 députation, article 202 régime général). Iniana tsy hitovy ny fe-potoana ahafahana manao fanoherana voka-pifidianana. Roa andro aorian’ny famoahana ny voka-pifidianana vonjimaika no fe-potoana ahafahana manao fitoriana mitondra fanakianana ny voka-pifidianana filoham-pirenena sy solom-bavam-bahoaka. Fohy loatra io fe-potoana io, tokony averina folo andro aorian’ny datim-pifidianana toy ny teo aloha. Ao anatin’ny lalàna ankapobeny momba ny fifidianana anefa dia mandram-pivoakan’ny vokatra vonjimaika no ahafahana manao izany. Atahorana noho izany ny tsy handraisana ny fitoriana rehetra ka voatery manaiky ny vokatra ny rehetra.
Raha ireo teboka ireo no zohiana akaiky, hita taratra fa tsy zo fototra intsony ny fahafahana mifidy. Tsy maintsy miankina amin’ny fanjakana avokoa ny dingana arahina amin’ny fifidianana, manomboka amin’ny fisoratana anarana anaty lisi-pifidianana hatramin’ny fandatsaham-bato sy ny voka-pifidianana. Toe-javatra mila arahina akaiky sy fandinihana lalina ho an’ny olom-pirenena tsirairay avy, indrindra fa ireo parlementera izay handany izany lalàna hifehy ny fifidianana izany.
Fisandratana 2030 : Des universitaires à Iavoloha
Nouvelles lois électorales : Des dangers pour la démocratie à Madagascar